Nadi: Tarisa uone Fiji Airways Premier Lounge
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Nadi: Tarisa uone Fiji Airways Premier Lounge
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Fiji Breaking Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
iji Airways, Fiji's National Airline, yakaratidza yavo nyowani nyowani-ye-iyo-bhizinesi kirasi imba yekutandarira kuNadi International Airport. Kutevera gumi nemaviri dhizaini uye kusimudzira, iyo Fiji Airways Premier Lounge ndeyekutanga-ye-yayo-yerudzi dunhu yakazara nezvakawanda zvakasarudzika maficha anosanganisira chef-akafuridzirwa mamenyu, baristas, yakasarudzika spa, nanny sevhisi uye yakasarudzika 'Fiji Bhinzi Ngoro '.
Iyo 200-seat lounge inopa yepasirese imba yekutandarira ruzivo pamwe yakatsaurwa nzvimbo yemhuri, Quiet Zone uye Media Media iyo inopetwa seyakavanzika nzvimbo yemusangano. Iyi ndeimwe yemahombekombe ekutanga mudunhu reAustralasiya kuve nemakamuri evana akasarudzika anonzi Lailai Land, iyo inouya izere neFian Nanny anonyatsokwanisa - anopihwa nzvimbo dzekugara dzeFiji dzakakurumbira. Iine nanny iri kupihwa yekutarisira vana, vabereki vanogona kuzorora muimba yekutandarira negirazi-rakafukidzwa girazi revana rinoonekwa kubva munharaunda yemhuri.
Zvekudya uye zvekunwa, imba yekutandarira inosanganisira yakazara yekicheni kicheni uye buffet inopa yemuno neyekunze chikafu, pamwe nenzvimbo yekudyira, barista uye bhawa.
Barista ichapa vaenzi vachangobva kugadzira kofi mangwanani, uye yakasarudzika Fiji Airways 'Siginecha Cocktails ichave iripo manheru. Iyo yekuzvimiririra-bhawa bar, ine sarudzo yemubairo-kuhwina waini, yemuno nedzekunze doro uye zvinwiwa, zvinowanika mukati mezuva rese.
Fiji Airways iri kupawo yakasarudzika yeFijian kushanduka pamaitiro ematiraki ezvikafu neFiji Bean Cart iri mulounge. Fiji Bean Carts chikamu chemufananidzo wehupenyu hweFijian, vachitengesa zvekudya zvinonaka uye zvinotapira pamisika uye zviteshi zvebhazi mutaundi rega rega munyika. Fiji Bean Cart paimba yekutandarira ichapa vashanyi mukana wekuenzanisira mhando yezvinonaka zvemuno.
Fiji Airways Premier Lounge ichavezve neBusiness Center, pamwe chete nenhamba dzinoverengeka dzechaji uye madoko e data munzvimbo yese ye887 sq. Mita.
Pamberi pekuvhurwa kwayo pachena neChipiri Zvita 19, Fiji Airways Premier Lounge yakaziviswa nezuro husiku pachiono chakakosha chakaitwa naFiji Airways 'Managing Director uye CEO, Andre Viljoen uye Fijian Gweta-General uye Gurukota rinoona nezve Civil Aviation, Anokudzwa. Aiyaz Sayed-Khaiyum.
VaViljoen vakati: “Tinofara kufumura Fiji Airways Premier Lounge, chiitiko chepasi rose chekugara muno muNadi. Tinodada nekukwanisa kupa chigadzirwa ichi kuvashanyi vedu veBusiness Class, nhengo dzeTabua Club, vashanyi veavo vatinoshanda navo nendege pamwe nevatengi vanobhadharira mari. ”
Zvimwe zvinhu zvinozivikanwa zveimba yekutandarira zvinosanganisira ruzha rwemagirinhi uye boka renyeredzi riri padenga rinomiririra mwaka weFiji wezhizha nemuchando.
Iyo yekubhadharira-yekushandisa spa inowanikwawo kune vese vashanyi vanopa marapirwo ekuratidzira kune vashanyi vari kutsvaga kuwana kwekupedzisira kubata kwoumbozha parwendo rwavo. Iyo spa sevhisi ichave zvakare yakavhurika kune vasiri-yekutandarira vashanyi kuburikidza nemusuwo wekunze.
Fiji Airways Premier Lounge ichavhurirwa vese vashanyi veBusiness Class uye nhengo dzendege dzeTabua Club nhengo dzinofamba nendege dzeFiji Airways dzenyika dzichibva kuNadi International Airport.
Hapana vakaurayiwa: Kudengenyeka kwenyika kune simba kwakazunza Girisi ...
Ndege indasitiri inorasikirwa kumusoro $ 200 bhiriyoni mu2020 ...
FAA Yakanyengerwa Kuzivisa Boeing 737 MAX: Nyowani Federal ...
Vols kubva kuHawaii kuenda kuAmerican Samoa kuHawaii ...
Inogumbura Sweatpants Inokonzera Huge Stir Kubva kuSpain kuenda ...
Glass Lewis anobatana neArabesque kusimudzira ...